Senator Coleman iyo Congressman Kennedy ayagoo ka jawaabaya codsi uga yimid Bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota ayay labo warqadood u kala direen madaxda dowladda dhexe ee Maraykanka u qaabilsan hawlaha maaliyadda iyo bangiyada iyo madaxda ka hortagga dembiyada la xiriira lacagaha iyo dhaqaalaha.
Warqadahaas waxa ay ku codsadeen in fiiro gaar ah loo yeesho dhibta soo gaareysa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka haddii ay waayaan bangi ay lacagaha ugu xawilaan eheladooda u baahan. Xildhibaanada waxaa ay warqadahooda si aad ah ugu sharxeen madaxda maaliyadda iyo bangiyada Maraykanka muhimadda ay xawaaladda u leedahay shacabka Soomaaliyeed.
Xildhibaanadan waxaa kale oo ay madaxda Aqalka Congress-ka Maraykanka u qaabilsan baniyada iyo lacagaha ugu baaqeen in ay yimaadaan Minnesota oo ay ku qabtaan dood dhageysi ah oo ku saabsan xawilaadda iyo bulshada Soomaaliyeed.
Cadeyn: Xawilaadaha Soomaaliyeed ee Minnesota waa furan yihiin oo lama xirin, waxa laga hadlayo waa mustaqbalka in aanan la joojin adeegyadooda iyo sidii loogu heli lahaa Bangiyo badan oo qabta adeegga xawilaadda. Isniinta Bisha August 28keeda waxaa Minneapolis/St.Paul ku shiraya Bangiga TCF iyo maamulayaasha Xawaaladaha Soomaaliyeed waxaana shirka ka soo qaybgeli doona xafiiska Senator Coleman. Wixii ka soo baxana waa la idiin soo gudbin doonaa, insha Allah.
Waraaqihii Coleman iyo Kennedy ka akhri halkan... (English)...
Isha: Xafiiska Norm Coleman | Faafin: SomaliTalk.com | Agoosto 27, 2006
Xawaaladaha Soomaaliyeed ee Minnesota oo Cabasho u Gudbiyey Senator Coleman
Maamulayaasha shirkadaha xawilaadaha Soomaaliyeed ee Minnesota oo isugu tegey xafiiska Sen. Coleman ka dib markii ay la soo deristay digniin culus oo kaga timid Bangiyadii ay lacagaha ku xawili jireen.
SomaliTalk.com| Minneapolis | Agoosto 25, 2006 | Isha warka: Xafiiska Sen. Coleman
Maalintii Isniinta ahayd ee bishan Agoosto 21keedii ayaa maamulayaasha shirkadaha xawaaladda ee Minnesota waxay cabasho u gudbiyeen Sen. Coleman ka dib markii bunuugtii ay lacagaha ka dirsan jireen u sheegeen inay joojin doonaan xisaabtooda iyo shaqadii ay u qaban jireen marka la gaaro bisha September 14, 2006.
Maamulayaasha weydiistay gar-gaarka iyo garab galka Sen. Coleman waxaa ay ka kala socdeen shirkadaha xawilaadda ee:
Hodan Global Money Services
Sagal Express INC
Maamulayaasha xawaaladaha Minnesota oo la shiraya xafiiska Sen. Coleman
Maamulayaasha xawaaladaha iyo hogaamiyeyaasha bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa sheegay inay arrintan tahay tacaddi iyo takoor lagula kacay qaar ka mid ah shacbiga reer Minnesota. Maamulayaasha waxaa ay ka digeen dhibta ka iman karta hadii shirkadahooda ay awoodi kari waayaan in ay sii wadaan shaqada xawilaadda oo ay sheegeen in ay kaafiyaan nolol maalmeed dad badan isla markaana ka abuureen shaqooyin badan Minnesota iyo Soomaaliyaba. Senator Coleman waxaa uu aad ula maqsuuday markii uu ogaadey in xawilaadaha Soomaaliyeed Minnesota ka qorteen shaqaale badan sidoo kalena shaqaale badan ka qorteen Soomaaliya sabatoo ah waa wax uu had iyo jeer u ololeeyo in shaqo badan la abuuro.
Bangiyada ayaa ayaguna ku andacooday in aanay wadin wax takoor ah ee laakiin dawladda dhexe cadaadis badan ku hayso iyo xisaabtan badan taasoo ka badatay dheeftii ay ka heli lahaayeen shaqada xawilaadda Soomaalioyeed. Dawladda dhexe inkastoo ay fasaxday ruqsadna siisay xawilaadleyaasha Soomaaliyeed hadana beryahanba waxaa ay adkeynaysay sharciyada dhowraya lacagaha ka baxa Mareykanka ayadoo il kulul ku eegta dhaqdhaqaaqa lacagaha oo dhan.
Senator Coleman oo aad u fahmay muhimadda ay xawilaada u leedahay shacabkiisa Minnesota ayaa sheegay inuu wixii karaan kiisa ah ka qayb qaadan doono inuu saacido laakiin cadeeyey in Bangiyadu ka madax banaan yihiin dawladda oo ay yihiin shirkado gaar ah oo diidi kara ganacsigii ay doonaan aanan lagu khasbi karin ganacsi aanay rabin. Dawladda Maraykanka ayaa caan ku ah in awoodadaha iyo shaqooyinku kala qaybsan yihiin oo aan la isku dhexyaacin ama aan la is fara gashan.
Senator Coleman ayaa bilaabay baaritaan ku sabsan dhibta meesha ay ka timid iyo wixii xal ah. Xafiiska Sen. Coleman ayaa noqday mid si gaar ah xil isaga saara arrimaha Soomaalida Minnesota asagoo ogsoon in haddii la joojiyo xawilaadaha dhamaan xafiiskiisa lagu soo banaan baxayo.
Isha Warka: Xafiiska Sen. Coleman.
Faafin: SomaliTalk.com | Agoosto 25, 2006.
Soomaalida haysta Sharciga Kumeel Gaarka ah oo 18-bilood loo Kordhiyey in ay sii Joogi Karaan Maraykanka...
WASHINGTON: Soomaalida Maraykanka ku jooga sharciga kumeel gaarka ah waxa ay sii joogi karaan dalka muddo dheeraad ah oo ah 18 bilood, sidaas waxaa Khamiis July 27, 2006 sheegay waaxda USA u qaabilsan ammaanka ee loo yaqaan Department of Homeland Security (DHS), sida ay soo werisey wakaalada wararka ee AP.
"Iskama taagnaan karno annagoo aan waxba qaban, mana ogolaan karno in bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota iyo daafada dalka Maraykanka in loo celiyo gobol ay ka jiraan colaad iyo rabshado," sidaas waxaa yiri Sen. Norm Coleman, oo DHS kala shaqeeyey arrimaha la xiriira kordhinta waqtiga.
Waxaa la rumaysan yahay in Minnesota ay ku dhaan yihiin Soomaalida ugu badan ee dagan USA.
Sida ay sheegtay DHS, qiyaastii 250 qof ayaa sharcigan ah dib u cudboonaysiinta ka faa'iidaysan doona.
DHS waxa ay arrintan ku dhaqaaqday isla maanta (July 27, 2006) oo ay 20 ka tirsan Baarlamaanka (wasiiro) dowladda Soomaaliya ay is casileen ayagoo dowlada (Soomaaliya) ee aan awooda lahayn ku eedaynaha in ay ku guul daraysatay in ay dalka nabad ka dhigto, waa sida warka (AP) u dhigaye.
Senator Coleman oo Ku Dhawaaqay $106,971 oo loogu Deeqay �Confederation of Somali Community in Minnesota (CSCM)�
Isha warka: Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Coleman
(Minnesota: USA) Senator Coleman oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa (Agoosto 3) ku dhawaaqay in �Confederation of Somali Community in Minnesota (CSCM)� loogu deeqay lacag dhan $106,971, lacagtaas oo uu bixinayo xafiiska Maraykanka u qaabilsan dejinta Qaxootiga. Deeqdaas oo loogu talo galay in lagu gacan qabto Xarunta East African Women�s Center oo laga caawinayo barashada luqada, u diyaar garowga iskuulka, arrimaha caafimaadka, iyo adeegyada bulshada.
"Waxaan ku faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in CSCM ay heli doonaan deeqdaas" ayuu yiri Coleman, oo intaas ku daray "Minnesota waxaa ku nool Soomaalida ugu tirada badan ee ku dhaqan dalka (Maraykanka), waxaana ka taageeray aqalka Congress-ka. CSCM waxa ay shaqo wanaagsan u qabatay jaaliyada. Waxaan ku faraxsanahay in aan ku taageeray sidii ay deeqdaan uga heli lahaayeen Xafiiska US ee Dejinta Qatootiga ayadoo la aqoonsaday muhiimada CSCM."
"Waxaan ku faraxsanahay in aan deeqdaan helo" sidaas waxaa yiri Siciid Faahiye oo madaxa CSCM. Waxana uu intaas ku daray "Deeqdaasi waxay caawin doontaa dumarka Soomaaliyeed si ay u dhexgalaan Gobolka Minnesota. Senator Coleman ayaa naga caawiyey si deeqdaasi aan u helno, waana uga mahad celineynaa."
Senator Coleman waxa uu aad ula shaqeeyaa Jaaliyadda Soomaaliyeen, dhowaana waxa uu ku guulaystey in sharciga kumeel-gaarka ah loo kordho Soomaali ku nool Maraykanka. Sidoo kale Coleman waxaa shaqaalaha xafiiskiisa ka mid ah Maxamuud Wardheere oo ah Immigrant, si uu uga caawiyo korna ugu qaado la xiriirka Jaaliyadda Soomaaliyeed.